महानिरीक्षक बढुवा छ्याल–ब्याल ! | PARDAFAS
महानिरीक्षक बढुवा छ्याल–ब्याल !
Posted: February 11, 2017 in By Deepak Kharel
तस्बिर सौजन्य: सर्च फर कमन ग्राउण्ड/पहुँच
देखेको प्रहरी, बोलेको प्रहरी र काम परे भोगेको प्रहरीप्रतिको आमधारणा फरक–फरक हुन्छ । संगठनमा राम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रहरी र खराब प्रहरी नागरिकको बुझाई र भोगाई अनुसार फरक छन ।
प्रहरीको काम नागरिकसँग र नागरिकको काम प्रहरीसँग । सडकमा ठोक्किने प्रहरी, घर छेउ भेटिने प्रहरी । रकम डुबाएर उठाउन प्रहरी, जिउधनको सुरक्षा चाहिए प्रहरी । जुलुसमा प्रहरी । घर–झगडामा प्रहरी । गाँउदेखि शहरसम्म नागरिक र प्रहरीको जम्काभेट भै रहन्छ । यसैले अहिले त्यही प्रहरीका बिषयमा भै रहेको खेल उनीहरु हेरेर बसेका छन । चिनेर बसेका छन खेलमा सहभागी खेलाडीको एक–एक चाल र झेल ।
तर हामी श्रमजीवि दिनहुँ ठोकिन्छौ, माझिन्छौ, भोग्छौ, सिक्छौ र सिकाउछौं प्रहरीलाई र प्रहरीसँग । अपराध क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकार मार्फत समाजसँग जोडिने बिषय हो प्रहरी । यसका ७२ हजार जनशक्तिसँग नागरिकजस्तै हामी बारम्बार ठोकिरन्छौ । यसर्थ सरकारको प्राथमिक बिषयलाई सार्वजनिक बहसमा लगिसकेपछि हामी नबोले को बोल्ने ।
प्रहरी इतिहास बनाउन अब्बल छ । प्रहरीका इतिहास रोचक र घोचक दुबै छन । थोरै बजेट भएर पनि ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने रुपमा होस वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा दुबैमा अब्बल छ प्रहरी । सिमित स्रोत साधनमा सफल अनुसन्धान तर कारवाहीमा छुचो, सुविधामा भुक्तभोगी, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा उत्कृष्ट, विश्वमा पहिचान र विश्वसँग सहकार्य सबैमा प्रहरी अघि छ । सामान्य लेखपढ देखि उच्च शैक्षिक र कार्यकुशलता भएका प्रहरी छन संगठन भित्र ।
आश्रित परिवार र कर्मचारी संगठनमा भविष्य खोजिरहेको हुन्छ । उसको रोजीरोटी मात्र होइन छाती फुलाएर राष्ट्र सेवक भन्न पाउने अधिकार हो प्रहरी । यहाँ चार जात, छत्तिस वर्ण छन । हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधि छन ।
प्रहरीले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैमा सेवा गरेको छ । लोकमानतन्त्र पनि प्रहरीले राम्ररी भोगेको छ । ज्ञानेन्द्रतन्त्र पनि भोग्ने यही प्रहरी हो । शेरबहादुरको चयन बामदेवको हवन, पूर्णबहादुरको प्रेम, भिमको प्रतिज्ञा खुमबहादुरको खेल, शक्तिको मेल र अहिले विमलेन्द्रको विनम्रता भोग्दैछ प्रहरी । राजनीति, अख्तियार, राजतन्त्र र सशस्त्र दृन्द सबै भोगेको यही प्रहरी हो ।
राजनीति भित्रको अपराध र अपराध भित्रको राजनीति दुबै बुझेको प्रहरी, कहिले नेताको गोटी र कहिले नेतालाई गोटी बनाउन खप्पिस छ । सुटकेश साटासाट र मन फाटाफाट चाडै गर्ने प्रहरी नै हो । यसका सबै कृयाकलापमा दोष–भारको ठुलो भागी उच्च नेतृत्व छ । प्रहरीमा उच्च नेतृत्वको सख्या अति न्युन छ ।
संगठनको नेतृत्व चयन प्रमुख मुद्दा हो । माथिको गन्थन प्रहरी बुझ्न काफी छ । अब कस्तो हुने प्रहरी र कसले गर्ने नेतृत्व । मुद्दामा जाऔं ।
नेपाल प्रहरी समयानुकुल बदलिने कि नबदलिने । हाकिमले केही पैसाको लोभमा नमिठो खुवाउदा, मिठोको खोजीमा जनता सताउने प्रहरी, सरकारले दिने कपडामा हाकिमको घातले भुवा र रंग उडेपछि भनसुन गरेर सिभिलमा जिन्स लगाउने प्रहरी र ठुला घोटालामा निलोवर्दीको बदनामी देखेपछि शहरमा शिर उठाउन नसक्ने प्रहरी । कस्तो हुने निर्णयको अधिकार जिम्मेबार अधिकारीको हो ।आफ्ना कमाण्डरलाई भन्दा राजनीतिक दलका ढोकेको सेवा र चाकडीमा फुली बढने, ठाँउमा पुग्ने र विदेश उडने भएपछि प्रहरी जे पनि गर्न तयार हुन्छ । यो रोक्ने जिम्मेबारी पनि जिम्मेबार अधिकारीको हो ।
प्रविधीको विकास, अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरदेशिय सञ्जाल, सक्रमणकालिन अवस्था, विश्व आतंकवाद, बढ्दो अन्तरदेशिय धु्रबिकरण र आफैमा रुपान्तरणको नितान्त अनिबार्यताका बिच अघि बढिरहेको नेपाल प्रहरी हो ।
यसको उत्पत्ती र हालको समायान्तरमा धेरै ब्यवस्था परिवर्तन भए । आर्थिक उत्पादन सुरक्षा, राष्ट्रिय विकास सुरक्षा, अन्तरदेशिय सुरक्षा र अन्तक्रिया, लागुऔषध र अवैध ब्यापार, वातावरण तथा मानविय सुरक्षाका बिषयमा अबको प्रहरी समयसापेक्ष र आधुनिक हुन अनिबार्य छ । होइन भने हामी मध्ययुगिन संस्कार र ब्यवहारबाट रोगी रही रहने छौ । प्रहरीको पहुँच र सम्पर्क प्रत्यक्ष समाजसँग रहने र समाजलाई कानुन, ब्यवस्था र क्रियाकलापका बिषयमा प्रत्यक्ष सहयोग र हस्तक्षेप गर्न सक्ने निकाय पनि प्रहरी नै हो । कस्तो समाज बनाउने जिम्मेबार निकाय प्रहरी पनि हो ।
नेतृत्व कस्तो बनाउने मुद्दामा माथिका सकारात्मक पक्षलाई अझै मजबुत र नकारात्मक पक्षलाई निस्तेनावुद बनाउने संकल्प गर्ने जिम्मेबार अधिकारी चयनको प्रथम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
तर यस वावजुद आफैले आफ्नो बख्यान, कृतयान, बयान र उच्चयान गर्ने अधिकारीको बोलबाला छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भन्दा उनिहरुलाई अर्को कार्यालय र निवास बिश्वासिलो र भरपर्दो छ । किन भन्दा प्रहरी र नेताले कहिले जनसेवक प्रहरी बनाउन र हुन चाहेन्न । जसको भुक्तान हामी किस्ता–किस्तामा एउटा प्रहरी, चौकीको प्रहरी, जिल्लाको प्रहरी, अञ्चल र क्षेत्र हुदै मुख्यालयसम्मको प्रहरीलाई गरिहेका छौं । एकाधलाई अख्तियारले डाम्छ, त्यो पनि आफ्नै स्वार्थका लागि ।
लोकमान ढलेपछि प्रहरीका कर्तुत बाहिर आउदै छन । आउने छन । आएका पनि हुन । उनकै दरबारबाट बढुवा पाउने, मान्छे कजाउने र भजाउने सबै प्रहरी हामी चिन्छौ । भन्दा शक्तिको पुजारी हो प्रहरी । गृहमन्त्री पूर्व र वहाल चाहिदैन गृह भए पुग्यो प्रहरी तिन्निक तन्किन्छ । किन भन्दा नीतिले प्रहरी चलेन, नीतिमा चलाउन उनिहरुले चाहेन्न । अब नीतिमा चल्ने र चलाउने जिम्मेबार अधिकारी चाहिएको हो ।
फौजी संगठन हो । हिजो मोर्चामा हतियार लिएर लडेको हो । भोली आवश्यकता परे सीमामा थप बल बनाउनु पर्छ । धेरै जिम्मेबार र संबेदनशिल पनि हो प्रहरी ।
एउटा दलको प्रमुखले फलानोलाई काखि च्याप्यो । मन्त्रिपरिषदका हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अर्कोको पक्षमै छन । इतिहास रच्दै बढुवा अगावै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सार्वजनिक सरोकारको बिषय बन्यो प्रहरी महानिरीक्षको बढुवा, सर्वोच्चको रिट मान्यताको ठहर हो । बढुवा अगावै अदालतले आदेश दिनेछ । बालुवाटारमा गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीको छलफल भयो । महान्याधिवक्तासँग राय मागियो । भोली मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ला ।
अब, भन्नुस कस्तो प्रहरीले प्रहरीको नेतृत्व गर्ला? प्रहरीलाई मान होइन मान्यता चाहिएको हो । प्रहरीलाई कानुनले चलाउनु पर्छ । कानुन पालना प्रहरीले गराउनुपर्छ । तर हामी चुनावमा धाधली गराउने प्रहरी अधिकारीलाई आफ्नो धाधली सदर गर्न इमान्दार बनाउदै छौ, घुसमा बढुवा दिएर । अनि चुनावी महानिरीक्षक खोजिरहेको डंका पिटेर नागरिकबाट सदर गराउदै छन दलका अमुक नेता । अनि नागरिक दलको प्रहरी दाई भन्दै आफ्नो मताधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्ष र विपक्षमा आफै मतदान गर्दैछौ । सामाजिक सञ्जालमा पोतिएका समाचारजन्य बिचार यसैका सज्ञा हुन ।
अन्तमा उस्तै प्रहरीसँग रमाउने कि सन्ततीका लागि असल प्रहरी छोडेर जाने । अब बिषय र बल दुबै नागरिकको कोर्टमा छ । महानिरीक्षक बढुवा बिषय सर्वोच्चमा रिटसँगै सरकारको मात्र रहेन, सार्वजनिक भएको छ ।
(यो समाचार होइन, अनुभव र बिचार समेटिएको ब्लग हो । यसमा राखिएका बिचार लेखकमा सुरक्षित छन । ब्लगको अंश वा पूर्ण उत्रान बन्देज गरिएको छ )